4shokelay: October 2009
ABSDF ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း ၂၁ မြောက် ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်
Posted by HRmyanmar at 12:33 PM No comments:
ထောင်ဒါဏ် ၁၅ နှစ် ချမှတ်ခံထားရသူ သားစိုးလေးအတွက် ရဲဘော်/ဘက်တွေရဲ့ ပြောစကားများ
The Best Manure 007
Posted by HRmyanmar at 11:59 PM No comments:
ကိုမြင့်နိုင် နှင့် မနန်းအေး အမှုအား ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားသည့် ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း
ဗွီဒီယိုသတင်းမှတ်တမ်းတင်သူ - ko magtoo
Posted by HRmyanmar at 10:53 AM No comments:
သန်းရွှေ ( သို့ ) ဘီလူးတစ်ကောင် ကို ဆန့်ကျင်တော်လှန်ကြစို့
လက်တွဲညီကာ ဒီမိုကရေစီ တိုက်ပွဲသို့ ဦးတည်သွားလာနေသော ပြည်သူ/ပြည်သား၊ နိုင်ငံရေးသမား၊ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးများ နှင့် ကဏ္ဍပေါင်းစုံမှ လူတန်းစားအသီးသီးသို့ ပန်ကြားခြင်း၊
တကယ်တော့ သန်းရွှေဆိုတာ လူမဟုတ်ဘူး။
ဘီလူး။ တကယ့် အသားစားဘီလူး၊ ရဟန်း၊ ကျောင်းသား၊ ပြည်သူ အားလုံးစားသော ဘီလူး။
ခင်ဗျားတို့သိပါတယ်။ သန်းရွှေဆိုတာ မြန်မာပြည်အတွက် အသုံးမတည့်သော လူတစ်ယောက်။
အန္ဓပုထုဇဉ်။ ခင်ဗျားတို့လက်ခံမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ သန်းရွှေရှိနေသမျှ မြန်မာပြည်ဟာ ဖွတ် နိုင်ငံဖြစ်နေမှာပဲ။
ဒါကြောင့် သန်းရွှေကို မြန်မာပြည်က မောင်းထုတ်ပစ်ရမယ်။ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုကလဲ သာသနာအဖြစ်မှ ကြဉ်ဖယ်လိုက်ပြီ။
အဲ့အတွက် သန်းရွှေသည် ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ သန်းရွှေသည် မိစ္ဆာဒိဌိ ပဲ။
သန်းရွှေကို မြန်မာပြည်က မောင်းထုတ်ကြပါစို့။
သန်းရွှေကို ပြည်သူအပေါင်းတို့ ၀ိုင်းဝန်းတိုက်ထုတ်ကြပါစို့။
သန်းရွှေ နှင့် တကွ အပေါင်းအပါတို့အား တိုက်ထုတ်ကြပါစို့။
အသုံးမကျတဲ့သူတွေ အုပ်ချုပ်နေသော မြန်မာပြည်မှ ပြည်သူပြည်သားများ လွတ်လပ်ခြင်းအငွေ့အသက်တွေကို ရှူရှိုက်ဖို့အတွက်
သန်းရွှေ နှင့် တကွ စစ်အာဏာရှင်များအား ရဟန်း၊ ရှင်လူ၊ ပြည်သူ၊ ပြည်သား၊ ကျောင်းသား၊ အလုပ်သမား၊
မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံး ၀ိုင်းဝန်း၍ မောင်းထုတ်ကာ နိုင်ငံတကာ ကြိုးမိန့်သို့ ပို့ဆောင်ပေးကြပါ။
Posted by HRmyanmar at 9:13 AM No comments:
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သက်ဆင်နဲ့ နှိုင်းလို့ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ကာကွယ်
အာဆီယံထိပ်သီး အစည်းအဝေး တက်ရောက်ဖို့ ထိုင်းနိုင်ငံ ဟွာဟင်းမြို့မှာ ရောက်ရှိနေတဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ် ဟွန်ဆန် က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း သက်ဆင်ကို နှိုင်းယှဉ်ပြောဆိုလိုက်တဲ့အတွက် ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် အဘီဆစ်က မြန်မာ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဘယ်သူနဲ့မှ နှိုင်းယှဉ် မရနိုင်ဘူးလို့ မနေ့က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကြောင်းကို လူအများက ပြောနေကြသလိုပဲ သက်ဆင်အကြောင်း ဘာကြောင့် ပြောလို့ မရနိုင်ရမှာလဲ၊ ဒါကို တခြားနိုင်ငံရဲ့အရေးကို ဝင်ရောက် စွက်ဖက်တယ်လို့ မယူဆနိုင်ကြောင်း ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်က ပြောခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် အဘီဆစ်က အခုလို တုန့်ပြန် ပြောကြားလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မစ္စတာသက်ဆင်ကို လူသားချင်းစာနာတဲ့ အနေနဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာ ဧည့်သည်အဖြစ် ခိုလှုံခွင့်ပေးပြီး စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် တာဝန်ပေးဖို့ ရာထူးကမ်းလှမ်းမယ်လို့ ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်က ပြောပါတယ်။
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် အဘီဆစ်က နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ၁၈ လ ကျခံနေရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သက်ဆင်တို့ကို အခြေအနေချင်း အတူတူပဲလို့ ထင်မြင်ယူဆတဲ့သူ များများစားစား ရှိမှာမဟုတ်ကြောင်း၊ ဒီလို နှိုင်းယှဉ်ယူဆတာဟာ ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ် အနေနဲ့ တကယ့် အခြေအနေကို နားလည်မှု လွဲနေတယ်ဆိုတာ ထင်ထင်ရှားရှား ပြသလိုက်တာပဲလို့လည်း ပြောဆိုသွားပါတယ်။
Posted by 4shokelay at 1:30 AM No comments:
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်နေ့မှာ နှစ်ပေါင်း ၂၀ အတွင်း နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဘ၀နဲ့ ထိန်းသိမ်းခံနေရတာ ၁၄ နှစ်ပြည့်အတွက် ဒါလေးပြန်တင်လိုက်ပါတယ်
အဲဒီနေ.ကပေါ့ ................သူအိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်။ မာတာ မိခင်အတွက်ပေါ့။
အိမ်မှာ အသံ တစ်ခု ကြားတယ်။ မဖြစ်တော.ဘူး။
အိမ်မှာ ဆက်နေ ရမယ်။ သူ.အိမ် အတွက်ပေါ့။
သူ.အိမ်ကလည်း သူ.အဖေဆောက် ပေးခဲ့တာလေ။
အင်း ........ အဖေဆောက် ခဲ့တဲ့အိမ်လေးကို ပြုပြင်ရမယ် ပေါ့။
အဲဒိနေ.ကပေါ့ သူ.အိမ်လေး မွန်းမံဖို. အုတ်၊ သဲ ၊ ကျောက် တွေ အပြည်.ရခဲ့တယ်။
အော် ..........နောက် ရက်မှာ.......... မုန်တိုင်းတွေ ကြလာတယ်။
နောက် သူလည်း မုန်တိုင်း ဒါဏ်ကြောင့် “၀ှီးချဲ“ ပေါ်ကမဆင်းနိုင်ခဲ့ဘူး။
သူ. ရည်ရွယ်ချက် အတိုင်း သူ.အိမ်လေး မွန်းမံဖို.လုပ်ခဲ့တယ်။
သူ. အိမ်ကို ငါ့ အိမ်ပါ ဆိုပြီး လူတစ် ယောက် က လုယူပြီး သူ. ခြေထောက်တွေရိုက် ချိုး ခဲ့တယ်။
“ ၀ှီးချဲ“ ပေါ်ပြန် ရောက် သွားပြန်ရောပေါ့။
ရက်စေ့ ရင်တော့ လမ်းပြန်လျှေက် နိုင်မှာ ပါတဲ့။
ဆရာဝန်ကပြောတဲ့ ရက်စေ့ လို. လမ်းပြန်လျှောက် နိုင် ခါနီးမှာ.............
နောက်ဘက် အိမ်က ဧည်.သည် တယောက် ရောက်လာတယ်။
အဲဒီ ဧည်.သည့်  သူ.ကို “၀ှီးချဲ“ ပေါ်တင် ပြိး တွန်းပေးနေတုံး မှာ..............
သူတို.နှစ်ယောက်လုံး နွံ ထဲ ပြုတ်ကြ ခဲ့တယ်။
ကယ်မယ့် သူတွေ လည်းလာခဲ့ပါတယ်
ဒါပေမယ့် ကယ်လို. မရခဲ့ပါဘူး............................
အိမ်ဆောက် ချင်တဲ့ သူ.ကို နစ်မြုတ် မသွားအောင်
တစ် ခုခု လုပ်ပေးဖို.သင့်ပြီ..........။
Posted by 4shokelay at 3:31 AM No comments:
Posted by HRmyanmar at 9:22 AM No comments:
“ အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုအောင်ရမည် ”
Posted by 4shokelay at 9:38 AM No comments:
Posted by 4shokelay at 9:34 AM No comments:
နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပသည့် ယခု အဆို အက အရေး အတီး ပြိုင်ပွဲများကို စစ်အစိုးရဗိုလ်ချုပ်များအားလုံး မဖြစ်မနေ သွားရောက်ကြည့်ရှုရမည်ဟုညွှန်ကြားထားသကဲ့သို့ နေပြည်တော်ဝန်းကျင် ကျေးရွာများမှ ဒေသခံ ပြည်သူ များကို လည်း မဖြစ်မနေလာရောက်ကြည့်ရှုရန် အမိန့်ထုတ်ထားသည့်အတွက်ဒေသခံများမှာ စိတ်ပါ သည်ဖြစ်စေ၊ စိတ်မပါသည်ဖြစ်စေ သွားရောက်ကြည့်ရှုနေရသည်ဟုလည်း အထက်ပါ နေပြည်တော်ဝန်ထမ်း က ဆိုသည်။
Posted by 4shokelay at 9:31 AM No comments:
နအဖ က `အာရုံဦး မှာဖူးသည့်ကြာ´ဆိုတဲ့ အမည်နဲ့ ၈၈ အကြောင်း ဇက်လမ်းထွင် ရိုက်ကူးနေပါသည်။
ဒီဇာတ်ကားမှာ ဒါရိုက်တာက တင်သန်းဦး ပါ သရုပ်ဆောင်တွေကတော့ ယခုနာမယ် ကြီးနေတဲ့မင်းသား မင်းသမီးမော်ဒယ် အစုံပါပဲ ပရိတ်သတ်ကြိုက်အောင် လုပ်ထားတာပါ။ ဒီဇာတ်ကားမှာပါတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခုမှာ ကျောင်းသားတွေက ကျောင်းသားသမဂ္ဂ၀င်းထဲတွင် ကျောင်းသား သမဂ္ဂ အလံထောင်ပြီး ရေခဲရေရောင်းတဲ့မိန်းကလေးကို ရေထဲ အဆိပ်ခတ်တယ် ဆိုပြီး ခေါင်းဖြတ်တဲ့ ရိုက်ကွင်းပါ။တကယ်လဲ ကျောင်းသား သမဂ္ဂ၀င်းထဲမှာ ရိုက်တာပါ။ သူတို့ ကတော့ လုပ်နေမှာပါပဲ ကျွန်တော်တို့တွေကလဲ ပြန်တိုက်ရမယ်။ ဒါနဲ့ပက်သက်ပြီး အကြောင်းအချက် ခိုင်ခိုင် လုံလုံ နဲ့ ပြန်တိုက်သင့်ပါတယ်။ ကျောင်းသား အမြင်နဲ့ကြည့်ရင်တော့ တော်တော့်ကို စော်ကားတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ ကျောင်းသားဆိုတာ အချိန်တိုင်း တိုက်ပွဲတိုင်း တော်လှန်ရေးတိုင်း အမြဲပေးဆပ်ခဲ့ကြတာပါ။ ဒီလိုတော့ မစော်ကားသင့်ဘူး လို့ထင်ပါတယ်။မီဒီယာကလည်း မီဒီယာအလျှောက် ကျောင်းသားကလဲ ကျောင်းသား အလျှောက် ပြန်တိုက်ကိုတိုက်သင့်ပါတယ်။
Posted by 4shokelay at 3:26 AM 1 comment:
မင်းသမီး သက်မွန်မြင့်သည် ဗီဒီယို ရိုက်ကူးစဉ် မျက်နှာတွင် ဒဏ်ရာ အနည်းငယ်ရသွားကြောင်း ယနေ့ထုတ် သစ္စာဂျာနယ်တွင် ရေးထားသည်။
“သေနတ်ကျဉ်ဆံတွေ ကြားက ဖြတ်ပြေးတဲ့ အခန်း ရိုက်တာ သက်မွန်မြင့် မျက်နှာ နည်းနည်း ထိသွားတယ်။ ထိသွားတယ် ဆိုပေမယ့် မဆိုစလောက် စပါးလုံး တစ်ထောက်စာကလေးပါ” ဟု ဒါရိုက်တာ တင်သန်းဦးက ရန်ကုန်အခြေစိုက် သစ္စာဂျာနယ်ကို ပြောသည်။
ဒဏ်ရာမှာ သေးငယ်သော်လည်း အရေးကြီးသည်ဟု တပ်မတော်အရာရှိတဦးလည်း ဖြစ်သူ ဒါရိုက်တာ တင်သန်းဦးက ပြောသည်။
“မင်းသမီးတယောက်အတွက်ကလည်း မျက်နှာက သိပ်အရေးကြီးတယ် ဆိုတော့ ညှော်တွေ ဘာတွေ ၀င်သွားရင် သေးသေးလေးကနေ အကြီးကြီး ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လေ။ အဲဒါနဲ့ သူ့ကို ပါလာတဲ့ ဆေးအဖွဲ့နဲ့ပဲ ဆေးကုသပေးခဲ့ရပါတယ်” ဟု ဒါရိုက်တာက ရှင်းပြသည်။
သက်မွန်မြင့် ရိုက်ကူးနေသော ဇာတ်ကားသည် တပ်မတော်အစိုးရ၏ ၀ါဒဖြန့်ချိရေး ဇာတ်ကား ဖြစ်ပြီး အရုဏ်ဦးမှာ ဖူးသည့်ကြာ ဟု အမည်ပေးထားသည်။ ထိုသို့သော ဇာတ်ကားမျိုးကို အရပ်သားများက ပေါ်လစီကား ဟု ခေါ်ပြီး နိုင်ငံတော်ကား၊ အကျိုးပြုကားဟုလည်း ခေါ်ကြသည်။ ထိုသို့သော ၀ါဒဖြန့် ဇာတ်လမ်းများတွင် ပါဝင်ကူညီပါက အကယ်ဒမီဆု ခေါ် ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆု ရရှိရန် အထောက်အကူ များစွာပြုသည်ဟု အများက ယုံကြည်ကြသည်။
အရုဏ်ဦးမှာ ဖူးသည့်ကြာ ရိုက်ကူးရာတွင် တပ်မတော်သားတဦးလည်း မီးလောင်ခံရသဖြင့် ဆေးရုံပို့လိုက်ရသည်ဟု ဆိုသည်။
ရှေ့လအတွင်း ရုပ်မြင်သံကြားဌာနများက ထုတ်လွှင့်မည့် ထိုဝါဒဖြန့်ဇာတ်ကားတွင် ပရိသတ်အကြိုက် သရုပ်ဆောင်အများအပြားကို ထုံးစံအတိုင်း ထည့်သုံးထားသည်။ ထို့ကြောင့် တီဗွီကြည့် ပရိသတ်များက ၎င်းတို့ ချစ်ခင် နှစ်သက်သည့် သရုပ်ဆောင်များစွာ ပါဝင်သည့် ဇာတ်ကားတခုကို အခမဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်သည့် အခွင့်အရေး ရမည်ဖြစ်သည်။
“ဒီဇာတ်ကားမှာ မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်းကြောင်း ပါမယ်၊ တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အခန်းတွေ ပါမယ်။ စစ်ကားကောင်းကောင်း ကြည့်ချင်တဲ့ ပရိသတ်အတွက် ဇာတ်ကားကောင်းတကား ဖြစ်မှာပါ” ဟု ဒါရိုက်တာ တင်သန်းဦးက အာမခံလိုက်သည်။
၀ါဒဖြန့် ဇာတ်ကားများတွင် တပ်မတော်အစိုးရသည် ပြည်သူလူထုကို ချစ်ခင်သော အစိုးရအဖြစ် ပုံဖော်ထားသည်။ ထိုဇာတ်လမ်းမျိုးတွင် ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင် ရိုက်ကွင်းများ ပါဝင်တတ်သော်လည်း တပ်မတော်သားများက အရပ်သားများကို ခိုင်းစေခြင်း၊ နည်းမျိုးစုံ အနိုင်ကျင့်ခြင်း၊ သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ မော်တော်ယာဉ်မျိုးစုံကို အတင်းအကျပ် ချောဆွဲခြင်း စသည့်ဖြစ်ရပ်များကို တွေ့နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
Posted by 4shokelay at 2:20 AM No comments:
Posted by HRmyanmar at 6:59 AM No comments:
Posted by HRmyanmar at 1:43 AM No comments:
AASYC မှ NLD ကြေငြာချက်အတိုင်း လက်တွဲပူးပေါင်း တိုက်ပွဲဝင်သွားမည်ဟု ကြေငြာ
Posted by HRmyanmar at 1:24 AM No comments:
Generation Wave (မျိုးဆက်သစ်လူငယ်အစည်းအရုံး)က ဆက်တိုက်နေဆဲ
Generation Wave (မျိုးဆက်သစ်လူငယ်အစည်းအရုံး)
ကျနော်တို့ Generation Wave(မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များအစည်းအရုံး)မှ
အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်- ပြည် ကားလမ်းတွင်ရှိသော ရွှေတောင်၊ ၀က်ပုတ်၊ အင်းမ၊ ပေါင်းတည်၊ နတ္တလင်း၊ ဇီကုန်း စသောမြို့များ၏ အုတ်နံရံများ၊ အုတ်ခုံများ၊ တံတားဘောင်များတွင် FREE-GW စားတန်းအားဆေးမှုတ်၍ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် အခြားနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအား ချက်ချင်းလွှတ်ပေးရန် တောင်းဆိုသည့် လှုပ်ရှားမှုများ အားပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ Generation Wave (မျိုးဆက်သစ်လူငယ်အစည်းအရုံး) အဖွဲ့ ဝင်များအား နအဖစစ်အာဏာရှင်မှ မတရားဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ထောင်ချခြင်းအပေါ် ကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းနှင့် လှုပ်ရှားမှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
www.gwave-network.co.cc မှ ဖြစ်ပါသည်။
Posted by HRmyanmar at 9:58 AM No comments:
ပညာမြေ ဒဂုံတက္ကသိုလ် အကြောင်း
ငါဟဲ့ Philo .....................ကျောင်းသား။ ။
Posted by 4shokelay at 6:24 AM No comments:
ဒီတစ်ခါလည်း ယတြာပဲလား မသိပါဘူးဗျာ အဟိ “၀န်ကြီးက မျက်စိခွဲစိတ်ပြီးသူများကို နေကာမျက်မှန်များ တပ်ဆင်ပေးပါတယ်” တဲ့ဗျာ ညကသတင်းမှာလေ၊ တော်တော့်ကိုပဲ တစ်ခါမှမကြားဘူးပါဘူးဗျာ လူတွေကို အရုပ်များမှတ်နေလား မသိပါဘူး။ န အ ဖ တို့ အလုပ်တွေ လုပ်ပြနေပုံများတော့ တော်တော့ကို ရယ်စရာကောင်း နေပြန်ရောဗျာ။ မြန်မာပြည်သူတွေ ဟာသဇာတ်လမ်းတွေ ကြည့်နေစရာမလိုတော့ဘူးဗျ ည(၈နာရီ) သတင်းစောင့်ကြည့်ရင်ကို ရယ်နေရပြီနော်။
Posted by 4shokelay at 6:23 AM 1 comment:
လူ့ဘောင်သစ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (၂၁) နှစ်မြောက် အထိမ်းအမှတ်
လူ့ဘောင်သစ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (၂၁) နှစ်မြောက်အထိမ်းအမှတ်
Posted by 4shokelay at 5:03 AM No comments:
Posted by 4shokelay at 4:34 AM No comments:
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ပေးစာတွင်ပါရှိသောအချက် ၅ ကိုလည်း ခွင့်ပြုရန်လို
DPNS Commentary 11 2009
Posted by HRmyanmar at 11:47 AM No comments:
Posted by HRmyanmar at 5:09 AM No comments:
Posted by HRmyanmar at 1:00 AM No comments:
Posted by 4shokelay at 10:42 PM No comments:
ထို့နောက် သံဃာတော် (၇) ပါးအား ဆက်လက်စစ်ဆေးရန် (သို့မဟုတ်) ပြစ်ဒဏ်ကျခံစေရန် အင်းစိန် အကျဉ်းဦးစီးဌာနသို့ လွှဲပြောင်းခဲ့ပြီး ယခုအခါ ကျန်ရှိသံဃာတော် (၁) ပါးအား ဆက်လက်စစ်ဆေးနေဆဲဟု ဆရာတော်များနှင့် နီးစပ်သည့် အသိုင်းအ၀ိုင်းမှ သိရသည်။
ပြည်ပနိုင်ငံအသီးသီးဟု ဆိုသော်လည်း အများစုမှာ ဘန်ကောက်ခရီးစဉ်မှ ဖြစ်နိုင်သည်ဟု သာသနာရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ ၀န်ထမ်းများက ယူဆကြသည်။
အဆိုပါစွပ်စွဲချက်နှင့်ပတ်သက်၍ သာသနာရေးခွင့်ပြုချက် လက်မှတ်ထိုးပေးခဲ့သော (သာ-ထွန်း-ပြန့်) ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်သိန်းညွန့်ကိုလည်း ဌာနအတွင်း အရေးယူမှု (PE-DE) ပြုရန် နအဖအာဏာပိုင်တို့မှ စီစဉ်နေပြီဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေသည်။
ယခုအခါ ပြည်ပသာသနာပြုခရီးအတွက် ပြည်ပထွက်ခွာခွင့် စိစစ်မှုများကို (၃) ပတ်ကြာသည့်တိုင် ခွင့်ပြုချက်မချသေးကြောင်း ပြည်တွင်းမှ ဆရာတော်တပါးက မိန့်သည်။
Posted by 4shokelay at 1:08 AM No comments:
တတိယအကြိမ် သပိတ်ကံဆောင်တာ အောင်မြင်တယ်လို့ သံဃာ့ တပ်ပေါင်းစုက မိန့်ကြား
သီတင်းက္ဆွတ်လပြည့်နေ့က ပြည်တွင်းပြည်ပ သံဃာတော်များ စစ်အစိုးရကို သပိတ်ကံဆောင်ခဲ့တာ အောင်မြင်တယ်လို့ သံဃာ့ တပ်ပေါင်းစုက RFA ကို ပြောပါတယ်။ စစ်အစိုးရအာဏာပိုင်တွေဟာ သံဃာတော်တွေကို စော်ကားခဲ့တဲ့ အပြင် သာသနာတော်ကို ပါ ညှိုးနွမ်းအောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့် အခုတတိယအကြိမ်မြောက် ပတ္တနိကုဇ္ဇန ကံဆောင်တာ အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုက မိန့်ကြားပါတယ်။
သံဃာ့ တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့ဝင် ဆရာတော်တပါးက ခုလိုမိန့်ကြားပါတယ်။
ဆရာတော်။ ။ 'ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေတို့၊ တောင်ကုတ်တို့၊ မောင်းတောတို့မှာ ရှိတဲ့ ကျောင်းတိုက် သုံးကျောင်းမှာ သံဃာတွေ ကံဆောင်ကြတယ်။ နောက် ဒီမနက်မှာရတဲ့ သံဃာတွေကနေ ပေးပို့တဲ့သတင်းအရ ဆိုလို့ရှိရင် လှိုင်သာယာမှာ ကျောင်းတိုက် သုံးကျောင်းမှာ သံဃာ ၁၂ ပါးစီ၊ နောက်ပြီးတော့ ထန်းတပင်မှာ တကျောင်း၊ အဲဒါလည်း ၉ ပါး။ မရမ်းကုန်း သုံးကျောင်းမှာလည်း သံဃာ ၁၁ ပါးစီ။ နောက် အင်းစိန် ငါးကျောင်းမှာလည်းပဲ ၁၃ ပါးစီနဲ့ ကံဆောင်သွားတယ်လို့ ဦးဇင်းတို့ သိရတယ်။ နောက်တချက်က အထက်မြန်မာပြည်မှာလည်းပဲ မနေ့က ကြေညာသွားတာကတော့ မန္ဈလေးစတဲ့ ကိုးမြို့မှာ သံဃာ ၉ဝ ကျော်နဲ့ ကံဆောင်သွားတယ် ဆိုပြီးတော့ ဦးဇင်းတို့ အဲလိုမျိုး သိရတယ်။'
ခုလိုမြန်မာပြည်တွင်းမှာ သပိတ်မှောက် ကံဆောင်နိုင်ခဲ့သလို ထိုင်းနိုင်ငံ အန္ဒိယ သိရိလင်္ကာစတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ သီတင်းသုံးနေတဲ့ သံဃာတော်တွေကလည်း စစ်အစိုးရကို သပိတ်မှောက် ကံဆောင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်နဲ့တကွ မန္တလေးစတဲ့ မြို့တွေမှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတချို့နဲ့ သိမ်တချို့မှာ အရပ်ဝတ်နဲ့ရော ယူနီဖောင်းဝတ်တွေနဲ့ပါ အာဏာပိုင်တွေ ရှိနေတဲ့အပြင် သံဃာထုကြားမှာလည်း ကြံ့ခိုင်ဖွံဖြိုးရေးအဖွဲ့ဝင်တချို့ သင်္ဃန်းဝတ်ပြီး ရောပါ နေတာတွေ ရှိတာကြောင့် သပိတ်ကံဆောင်တဲ့ သံဃာတော်တွေဟာ ခက်ခက်ခဲခဲ ဆောင်ရွက်ခဲ့ရတာ ဖြစ်သလို တချို့ ဒေသတွေမှာ သပိတ်မှောက် ကံဆောင်တာကို မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့ သိရပါတယ်။
ဆရာတော်။ ။ 'အဲ ပြောချင်တာကတော့ ဦးဇင်းတို့က ဒီကံက ကိုးပါးတည်းနဲ့ ကံမြောက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အခု အပါး ၁ဝဝ ကျော် ၂ဝဝ လောက်က ကံဆောင်ကြတယ်ဆိုတော့ တော်တော်ကို အောင်မြင်တယ်လို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။'
သံဃာ့ တပ်ပေါင်းစုက ဆရာတော်တပါး မိန့်ကြားသွားတာပါ။ သံဃာတော်တွေ အနေနဲ့ သပိတ်မှောက် ကံဆောင်တဲ့ပွဲများကို ၁၉၉ဝ ခုက မန္တလေးက သံဃာတော်တွေ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံရစဉ်က ဆရာတော်ကြီးများကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ပြီး တကြိမ်၊ ၂ဝဝ၇ စက်တင်ဘာလက ပခုက္ကူသံဃာတော်တွေ မေတ္တာပိွု့ွ့ကချီတာကို အာဏာပိုင်တွေက အကြမ်းဖက် နှိမ်နှင်းခဲ့တုန်းက တကြိမ်နဲ့ အခုလက်ရှိ သံဃာတော်တွေနဲ့ သီလရှင် ၂၄ဝ ကျော်ကို ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ပြီး ပြန်လွှတ်မပေးသေးတဲ့အတွက် တကြိမ် စုစုပေါင်း သုံးကြိမ် ကံဆောင်ခဲ့တာပါ။
သံဃာ့ တပ်ပေါင်းစုက အရှင် ဣဿရိယကို ဦးတင်အောင်ခိုင်က ဆက်သွယ်လျှောက်ထား မေးမြန်းထားပါတယ်။
Posted by 4shokelay at 1:05 AM No comments: